Vicente Romero ayaa sifiican u fahmay keega | Abuurista khadka tooska ah
Haddii Joaquín Sorolla uu awood u lahaa inuu soo qabto iftiinka cid kale, waxaan dhihi karnaa Vicente Romero wuxuu ku qabanayaa deegaanka shaqadiisa si aan horay loo arag. Inaad dareento heerkaas qoyaanku ama qalalan ee qorraxda ee ku dhaca qorrax dhaca waxay cusbooneysiineysaa dareenka la helay goorta mid ayaa lagu kiciyaa iyadoo la fiirinayo mid kasta oo keega ah.
Romero wuxuu inaga tagayaa sumadiisa mid kasta oo ka mid ah shuqulladiisa sawir ahaan waxay u dhowdahay inay ku dhawaato barxadaas halkaasoo haweeneyda fadhida ay fiirineyso hareeraheeda iyadoo cagaheeda waxyar dul saaran tahay kursiga. Shaqooyin taxane ah oo aan ka soo aruurineyno khadadkaan si aan isugu dayno inaan u gudbino sida ay u adag tahay qabashada deegaan sida ku dhacda inta badan shaqooyinka farshaxan yahan Isbaanish ah.
Vincent Romero sidoo kale waxay ku taabataa nalka caqli yaab leh shuqulladiisa qaar ka mid ah sida Canson i-Tientes 2015 pastel warqad aad ku leedahay hoosta. Daaweyn aad u fiican iyo gacmo leh farsamo cajiib ah oo ku dhow mid ka mid sakhraansan.
Waxba kama sheegi doonno waxaaga xiisaha haweeneyda Waxay u taagan tahay qaab malaa'ig ku dhowaad ah laakiin waxay joogtaa xilliyadeenna oo aan u janjeerno inay ka qaybgalaan fasiraad badan iyo cayriin xaaladaha qaarkood. Haweeney ixtiraam leh, fudeyd iyo is-hoos-u-dhigeeda muuqaalkeeda taasna Romero ayey ku maamuustaa sidan oo kale.
Rinjiraha wuxuu ku dhashay Madrid 1956 iyo hadda wuxuu ku baraa Farshaxanka Fiican Kulliyadda San Fernando ee Madrid. Caadi ahaan wuxuu aqoon isweydaarsiyo ku siiyaa istuudiyaha qaarkood, sidii dhacday bilo kahor Istuudiyaha Hellas Art halkaas oo aan dhowr sano ku qaatay shaqaynta. Had iyo jeer waad isaga raaci kartaa isaga facebookaga si aad uga feejignaato shaqooyinkiisa cusub, bandhigyadiisa iyo aqoon isweydaarsigiisa sida kan la sheegay.
Rinjiye aan caadi ahayn iyo farshaxan oo aan kala socon doonno khadadkaan munaasabado badan iyo cidda wuxuu soo bandhigayaa aqoon wanaagsan leh keega. Hadaad ifka raadiso kaalay gelitaankan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Fanaaniin » Keegga iyo haweeneyda ku jirta shaqada gaarka ah ee Vicente Romero